Kudya kweKisimusi muCuba | Absolut Kufamba
maruuzen | | Kiyuba
La navidad Inguva yakakosha zvikuru yekuve kure nemusha, parwendo, pazororo. Ini pachangu, ndinoda kushandisa zororo mune imwe nyika, mune imwe tsika. Iwe unogara uchirarama zvakasiyana. Saka, nhasi, tinoshamisika nezvekuti Krisimasi inorarama sei muCaribbean uye chii iyo Kudya kweKisimusi muCuba.
Cuba inyika ine tsika dzechikirisito, saka tichawana tsika dzakafanana neveSpanish. Kana kwete? Ngatione.
1 ChiKristu muCuba
2 Krisimasi muCuba
Kunyangwe paine rusununguko rukuru rwechitendero pachitsuwa ichi, iyo koloni yakasiya chiratidzo chakasimba chechiKristu pachiri. Nekudaro, iyo yekutengesa kwevaranda kubva kuAfrica yakagadzira zvakare inonakidza uye syncretism huru yechitenderoSaka pane zvakawanda zvekunamata kweAfrica pachitsuwa.
Izvi zvinoonekwa, semuenzaniso, mukuita kwe santeria, chinamato chevaAfro-Cubans icho munguva dzekoloni varume nevakadzi vakaunzwa kubva kuAfrica vaifanira kudzidzira mukuhwanda.
Nhasi, chokwadika, izvi hazvisizvo, uye Santeria inogara pamwe neKaturike. Chechi inoti a 60% yevagari veCuba maKaturike. Kune zvakare maPurotesitendi, makereke akasiyana siyana, maMuslim, maJuda, uye maBhudha, kungodaidza zvitendero zvakakosha.
Ichokwadi zvakare kuti kubva kuCuban Revolution tsika yekunamata yaive yakarambidzwa uye kubvira ipapo zvaisave nyore kwazvo kushandisa chero chitendero. Zvishoma nezvishoma, nekupfuura kwemakumi emakore uye shanduko dzepasirese, iyi mamiriro aive achichinja uye paive nezvimwe kuyanana pakati peHurumende neChechi yeKaturike kunyanya uye zvitendero zvakawandisa.
Paunofunga nezve huwandu hweKisimusi iwe yawakapemberera, iyo nhamba yezvishongedzo, miti, mwenje uye zvipo zvawakaona muhupenyu hwako ... unoshamisika kuti zvakadii izvozvo Krisimasi muCuba chimwe chinhu chemhemberero ichangoburwa. Uye hongu, ndizvo. Uye chikonzero chine chekuita nezvatinazvo muchikamu chakapfuura. Kwenguva yakareba chinamato chaive, kana chisina kurambidzwa, chisina kumbokurudzirwa.
Ichokwadi ndechekuti ruzhinji rwevanhu veCuba vane hanya zvishoma kana kushaya hanya nezvekupera-kwegore kwemhemberero dzechitendero. Kune vamwe kana ivo vari zvakare vane chigumbu zvishoma kuti kwechinguva chikamu ichi cheKisimusi chiripo zvakanyanya uye chiri a chiitiko chekutengesa kupfuura zvekunamata. Zvese.
Kisimusi iri kumadokero kwenyika haisisiri yenguva pfupi yekusangana, chirairo pamwe nezvimwe uye zvakanaka manzwiro nezvido. Kwenguva yakareba, yanga ichipfuura nezvipo, kushandisa, kutenga ... uye muCuba, izvo zvishoma zvishoma imari. Nekudaro, kune pati iyo kushandirwa nevatengi kunoita kuti iwe ufare asi iwe usina mari nazvo. Kuenzanisa kwakaipa.
Asi zvakaipa here kupedza Kisimusi usina mari? Zvirokwazvo kwete, zvinofanirwa kugara zvakadaro, kana iwe ukandibvunza. Saka chii chakanaka nezvazvo Krisimasi muCuba yakanyanya nezve kusangana kwemhuri uye shandisa imwe nguva yakanaka nevadiwa uye shamwari pane kuchinjana zvipo zvegodo. Saka kana iwe uchitsvaga a isiri yekutengesa kisimusi, Cuba ndiyo inoratidzwa nzvimbo.
Inofanira kutaurwa kudaro Nhasi unoona yakawanda mweya weKisimusi mumigwagwa, ine zvishongedzo nezvimwe. Semuenzaniso, mune yakakurumbira Calle Obispo kana muOld Havana muzvizhinji maruva akarembera kana miti yeKisimusi nevarume vechando vanoonekwa muzvitoro. Kunze kwemuno, hazviwanzo kuona zvishongedzo uye tisingataure maparagi kana mhemberero dzekuvhenekera mwenje yemavara. Kuchinjana kukwazisa nevavakidzani? Zvimwe.
Vamwe vanhu vanoisa muti weKisimusi mudzimba dzavo asi panogona kunge pasina zvipo pasi uye hapana zvipo zvekuchinjana. Ehe, chero munhu ane muti ane muchidyiro. Iwe hauzoone Santa Claus chero kupi, uye hauchazonzwa marisimusi eKisimusi kana kuona makadhi eKisimusi. Kunze kwemari iri kushandiswa pane chimwe chinhu, hapana tsika.
Zvakare, kunyangwe iri zororo reCatholic / Christian avo vanoita zveSanteria vanowanzo pedza mazuva iwayo nemhuri yavo zvakare. Kunyangwe paine chokwadi chekuti nhasi chitendero neHurumende hazvisi kurwa, chokwadi ndechekuti chiKatorike hachina kukwanisa kudzoka kuhuwandu hwevakatendeka zvavaive nacho pamberi peRevolution, uye haina mari yemapato, zviitiko nezvimwe, saka kupemberera kwacho kunowanzo deredzwa kuita chikafu nemhuri uye vana vasingaendi kuchikoro.
Zuva rinonyanya kukosha iEvha Idzva Idzva, zvakanyanya kupfuura Kisimusi, nekuda kwekuti rakagara richipembererwa uye harina kumbobvumidzwa. Gare gare, mukati menyika yechiKristu, nguva yakakoshesesa Izuva reKisimusi, sezvazvinoitika mune dzimwe nyika zhinji dzeLatin America. Zvakawanda kupfuura Zvita 25, husiku hwemusi wa24 inguva iyo mhuri inosanganazve uye unakirwe ne Kudya kweKisimusi muCuba.
Kudya kwemanheru chikafu cheCuba chikafu uye dhishi rakajairika inguruve. Kana mhuri iri hombe, kunyangwe mhuka yese inobikwa uye inowanzo shumirwa nayo miriwo yakakangwa, miriwo uye mupunga. Iwe unodyawo yenguruve inoyamwa, yakagochwa nyama yenguruve nemupunga uye bhinzi nhema, mapurani, macroquettes ...
Kune dhizeti inoonekwa iyo mupunga kana mbatatisi pudding, flandzimwe nguva vamwe chokoreti keke yakanyoroveswa muRamu, iyo rum isinganwiwe. Chaizvoizvo ndezve pati, kuungana pamwe chete, kudya, kunwa, kutamba, kutamba mitambo inonakidza nekupedza husiku.
Uye kana, kana paine zvipo, zvinovhurwa mushure megumi nembiri husiku. Nekudaro, zvese zvinotanga nenguva dza9: 10 manheru nekudya kwemanheru, kuenderera nedessert, mimhanzi uye hurukuro uye zvinopera imwe nguva mangwanani mushure mekuvhura zvipo nekuenderera mberi nemusangano.
Asi hapana here chero rudzi rwemhemberero dzakakurumbira? Ehe, maParranda. Zvita 24 inopembererwa Mapati, asi ivo havana hukama neKisimusi, vanongowira musi weKisimusi uyezve vanobva vatonyanya kufarirwa. Anonyanya kufarirwa maParrandas de Remedios, ane mafireworks uye zvese. Uye ivo vakanaka, zvakanyanya zvekuti UNESCO akavasanganisira mune yake runyorwa rwe Isingaoneki Nhoroondo Yevanhu.
Sezvauri kuona, Krisimasi haisi nguva yakaipa yekuenda parwendo kuenda kuCuba. Nyika haimire, sekune dzimwe nzvimbo, haisi yekutengesa asi ine hukama hwakanyanya. Uye Kisimusi yekudya kwemanheru ndeyechinyakare saka kana iwe uine rombo rakanaka rekugovana naro nemhuri yeCuba, iwe uchadya zvakanyanya zvakanaka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Kudya kweKisimusi muCuba
Chikafu chemangwanani cheItaly muRoma